Who is responsible? DVB or U Shwe Maung? « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Constitution, Election & Parliament Info » Who is responsible? DVB or U Shwe Maung?
“ဦးရွှေမောင်ကသာ လိမ်လည်ထွက်ဆိုရိုးမှန်ရင် မူလ ပြစ်မှုထက် နောက် တစ်မှု ထပ်တိုးသွားမှာ သေချာပါတယ်။ ဒီဗွီဘီက အထောက်အထားက ဗီဒီယို မှတ်တမ်းအပြင် ရိုက်ကူးသူ၊ မေးမြန်းသူတွေကိုပါ သက်သေအဖြစ် ဆင့်ခေါ်စစ်မေးနိုင်မှာပါ။ ဒီသက်သေတွေ ခိုင်ခိုင်လုံလုံ ရှိနေပြီ ဆိုရင်တော့ ဦးရွှေမောင် လိမ်လည်ထွက်ဆိုတာ ထင်ရှားလာမှာပါ။ လွှတ်တော်အမတ် တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့အတွက် လိမ်လည်ထွက်ဆိုမှုဟာ အရမ်းကို သိက္ခာကျဆင်းစေ ပါတယ်။ ဒါဟာ လွှတ်တော်ကို ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းအောင်လုပ်ဆောင်စေရာ ရောက်ရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရဘက်က စွဲချက်တွေ ထပ်တိုးလာနိုင်တဲ့အပြင် လွှတ်တော်ဘက်ကလည်း တစ်ခုခု အရေးယူရတော့မယ်၊ အကယ်၍ လွှတ်တော်က မသိကျိုးကျွံ ဆက်ပြီး လုပ်နေဦးမယ် ဆိုရင်တော့ လွှတ်တော်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်အပေါ် ပြည်သူတွေက ပြန်ပြီး ထောက်ပြ ဝေဖန်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်က ပြောကြားချက်တွေ သိရှိရသလောက် ဆိုရင် ဒီဗွီဘီနဲ့တင်မကဘူး၊ ဗွီအိုအေနဲ့ပါ ပြောဆိုထားတာတွေ ရှိသေးတယ် လို့ သိရပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ဦးရွှေမောင်ဟာ ငြင်းပယ် ရှောင်ထွက်လို့ မရတော့ပါဘူး။ ဆက်ပြီး လိမ်နေဦးမယ် ဆိုရင်တော့ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ အစိုးရဘက်က လည်း ဆက်ပြီး ထောက်ထားနေတော့မှာ မဟုတ်ဘူး ထင်ပါတယ်” ဟု တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေတစ်ဦးက ပြောသည်။